Sirta ka dambeysa guusha helitaanka typography Helvetica | Abuurista khadka tooska ah
Waa suurtagal in la yiraahdo, hubaal ahaan hubaal, in Helvetica waa nooca warqadda inta badan laga isticmaalo adduunka, maadaama aad u badan tahay inaad ku arki doontid wado kasta oo magaalada aad ku nooshahay, joornaalada aad aqriso oo dhan, xayeysiinta, bogagga internetka ee aad booqato iyo xitaa calaamadaha ganacsiga, iyo kuwo kale.
Helvetica waxay ka kooban tahay nooc font oo gebi ahaanba hal abuur leh asal ahaan, taas oo u suurtagashay inay abuurto luqad casri ah iyo mid hadda jirta. Iyada oo ay ugu wacan tahay dabeecadeeda wax ku oolka ah iyo dhex-dhexaadnimada ah, qaab-hawleedka noocaan ah goobta iyo adduunka, taas oo u oggolaanaysa inay ahaato nooca qormada ee muhiimka ah.
1 Asalka asalka Helvetica
2 Maxay yihiin astaamaha Helvetica?
3 Ha noolaato Helvetica?
Asalka asalka Helvetica
Noocani wuxuu ahaa oo ay abuureen Max Miedinger iyo Edouard Hoffmann inta lagu jiray sanadka 1957.
Helvetica waxay ahayd ujeedkeeda ugu weyn kor u qaadista akhrinta iyo bixinta caddayn weyn, casriga iyo dhexdhexaadnimada. Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, qaabeynta noocaan ayaa gabi ahaanba bedeshay horumarkiisa waxayna bilawday inay u dhaqaaqdo jiho gebi ahaanba ka duwan, maadaama ay dooneysay inay noqoto noocaas oo si fiican uga jawaabaya baahida loo qabo in la faahfaahiyo warqad loo adeegsan karo nooc kasta oo macluumaad casri ah, had iyo jeer si cadaalad ah loo akhrin karo oo la fahmi karo.
Guusha isha ceelkaan kadib soo bandhigeedu runti waa mid aad uxun. Shirkado badan iyo dowlado ayaa awooday inay ku arkaan Helvetica xalka ay ubaahan yihiin si ay awood ugu yeeshaan inay isu muujiyaan aduunka sida ay rabaan, xitaa hadii aysan dhab ahaan aheyn waxa ilahan ay matalayaan: daahfurnaan, marin u helid iyo masuuliyad.
Naqshadaynta tan awgeed font far, marka lagu daro walxaha kale qaarkood, ayaa loo oggolaaday Helvetica waxay ka mid tahay wajiyada lagu soo bandhigo aduunka hortiisaMaaddaama ay bixinayso shakhsiyad, waxay ka hadlaysaa wax adiga kugu saabsan isla markaasna waxay gudbisaa shucuur kala duwan. Taasi waa sababta ay uga mid noqotay hubka waaweyn ee isgaarsiinta, Calaamadeynta, iyo sidoo kale xayaysiinta iyo suuqgeynta casriga ah.
Maxay yihiin astaamaha Helvetica?
Waxay ka kooban tahay font in wuxuu leeyahay isku dheelitirnaan ficil ahaan ku habboon inta udhaxeysa miisaanka iyo miisaanka miisaanka mid kasta oo ka mid ah xarfaheeda. Sidoo kale waa dhex-dhexaad, adag, fudud oo, ka sarreeya dhammaan, xaraf la aqrin karo, kaas oo u oggolaanaya in lagu fasiri karo siyaabo kala duwan iyadoo loo eegayo macnaha ay leedahay iyo qaabkeeda.
Marka la eego astaamaha kor ku xusan, jumladdani waxay u oggolaaneysaa qof kasta inuu isticmaalo, iyadoo aan loo eegin ujeedka laga leeyahay, maxaa yeelay waa suurtagal u adeegso siyaabo badan iyadoon Helvetica luminaynin nuxurkeeda, tusaale ahaan calaamadaha iyo magaalooyinka waaweyn ama qaar ka mid ah shirkadaha waawayn sida "American Airlines", taas oo muujisay daacadnimo weyn oo qoraalkan ah, maaddaama aysan dib u habaynin astaanteeda.
Iyada oo ay la soo gudboonaadeen sifooyinkan, khubaro badan ayaa ka dooday in tani ay qaadeyso qaar ka mid ah shakhsiyadeeda iyo in kasta oo qaar "kiciyeyaal ah" ay aaminsan yihiin in ay ugu wacan tahay xawaareheeda iyo kordhintiisa weyn. Helvetica waxaa laga yaabaa inay noqotay nooc la yaqaan oo kale inay xitaa xoogaa caajis noqotay, sidaa darteedna maanta ay ficil ahaan u luntay dhammaan rafcaankii ay lahayd markii la abuuray.
Marka loo eego nashqadeeyayaashan, qaabka wanaagsan waa inuu lahaadaa dhimbiil iyo asal gaar ah, kuwaas oo ah sifooyin aysan Helvetica lahayn, maxaa yeelay iyaga iyagu awood uma laha, dabeecad ama muujinta, inay noqdaan nooc qaabaysan oo dheellitiran iyo sidoo kale in laga badbadiyay.
Ha noolaato Helvetica?
Sawirka Erik Spiekermann oo muujinaya dhibaatada Helvetica
Hadda ma waxaad raadineysaa habab cusub oo muujinta oo aad u muuqaal badan? Jawaabtu waa haa oo waa taa maanta waxaa jira khadad dhulka dhigaya oo isu rogaya inay ka soo horjeedaan waxa la aasaasay oo la amro, oo ka taga baahida loo qabo daahirnimo iyo daahirnimo xaraf kasta. Si kastaba ha noqotee, kuwa oo doorbiday Helvetica Uma maleynayaan inay tahay nooc caalami ah oo isku mid ah oo jaangooyooyin jaangooyooyin ah taa bedelkeedana waxay u maleynayaan inay tahay wax shaqsiyadeed, haddii aad ku darto taabasho ka duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sirta ka dambeysa guusha nooca 'Helvetica typeface'
Naqshad qaabdhismeed garaaf ah ama naqshad fidsan